Mitohy hatrany ny hetsika ataon’ny orinasa GALANA Madagascar hiarovana ny mpitatitra sy ireo mpandeha! Ny faha 18 sy 31 May 2020 dia hisitraka ny fizarana « gel hydroalcoolique » maimaim-poana ireo fira fitateram-bahoaka rehetra manjifa eny amin’ny tobin-tsolika GALANA. Izany no natao mba ho fiarovana ny mpamily sy ny mpandeha ary ho fiaraha-mientana hatrany amin’ny ady amin’ny fipariahan’ny valan’aretina Covid-19.
Fizarana « gel » fanasana tànana
Manoloana ny fipariahan’ny valan’aretina Covid-19 eto Madagasikara dia nanapa-kevitra ny hanohy ny hetsika efa natombony ny orinasa GALANA Madagascar. Tsy inona izany fa ny fizarana maimaim-poana ny « gel hydroalcoolique » ho an’ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra.
Izany no natao mba ho fiarovana ny mpandeha, ny mpamily ary koa ny « receveurs » amin’ny valan’aretina Covid-19. Efa nanomboka ny 18 May izany fizarana maimaim-poana izany ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 31 May ho avy izao.
Ny faha 18 sy 31 May 2020 dia hisitraka ny fizarana « gel hydroalcoolique » maimaim-poana ireo fira fitateram-bahoaka rehetra manjifa eny amin’ny tobin-tsolika Galana. cc: Galana
Marihina anefa fa izay fiara fitateram-bahoaka maka solika eny amin’ny tobin-tsolika GALANA rehetra ihany no afaka hisitraka izany “gel hydroalcoolique” natao hanasana ny tànan’ny mpamily, ny “receveur” ary indrindra ny mpandeha izany.
Ny hetsika famendrahana maimaim-poana
Tsy voalohany izao no nanatanteraka hetsika fiaraha-mientana hisorohana ny fipariahan’ny valan’aretina Covid-19 ny GALANA. Nanomboka ny 4 May lasa teo ihany koa dia nanolotra « désinfection express » na fanaovana famendrahana maimaim-poana ny fiara rehetra (fiara fitateram-bahoaka, fiaran’olon-tsotra, moto, sns) izay manjifa ny solika tao amin’ny GALANA izy ireo.
Hita eny amin’ny tobin-tsolika eto Madagasikara (Antananarivo, Antsirabe ary Toamasina) isan’andro manomboka amin’ny 7 ora ka hatramin’ny 10 ora io famendrahana maimaim-poana io. Ary tsara marihina ihany koa fa nohon’ny fiaraha-miasa miaraka amin’ny orinasa Agrivet sy ny vokatra Virocid no nahafahan’izy ireo nanatontosa ny hetsika rehetra efa natombony hatreto.
Publié dans Brand journalism et Malagasy